Pogba Magacaabay 4 Xidig Ee Uu Hada Ku Deysado & 8 Laacib Ee Uu Kubadooda Daawan Markii Uu Yaraa %
Pogba Magacaabay 4 Xidig Ee Uu Hada Ku Deysado & 8 Laacib Ee Uu Kubadooda Daawan Markii Uu Yaraa
Laacibka khadka dhexe uga dheela Manchester United, ee Paul Pogba, ayaa wuxuu soo xushay liiska ciyaartoyda ee uu xishmeeyo, islamarkaana uu wax badan daawado kulamada dheelayaan iyo waliba kuwii uu horey udaawan jiray.
Pogba oo Man United uga soo biiray dhigeeda Juventus oo wadanka Talyaaniga ka dhisan ayaa waxaa lagu soo iibsaday qiimo lacageed waali ah, taasoo ka dhigtay ciyaaryahanka saddexaad ee aduunka ugu qaalisan, wuxuuna ka dambeeyaa Neymar iyo Bale.
Laakiin, xidigaan reer France si fiican ma uusan uga soo dhalaalin lacagtaas, isagoona hadda umuuqda mid la halgamaya inuu la qabsado kooxda ku dheesha Old Trafford, waxaana kulamadii ugu dambeeyay uu haa mid keydka kusoo bilaabanayay.
“Markii aan yaraa waxaan had iyo goor eegi jiray Zinedine Zidane, Lionel Messi, Ronaldinho iyo Ronaldo. Waxaan kaloo muuqaalo aan ka hayn jiray Maradona, Pele, Chris Waddle, Kaka – ciyaartoy badan ayaan doonayay inaan ku deyasado,” ayuu yiri Pogba.
“Hadda, waxaan fiirsadaan [kulamada ay dheelayaan] ciyaartoyda sida Andres Iniesta [Barcelona] Yaya Toure [Man City], Kevin De Bruyne [Man City] iyo Luke Modric [Real Madrid],” ayuu hadalkiisa kusii daray.
Isagoo sharaxaad dheeri ah ka bixinayay sababaha uu udaawado ciyaartoydaan ayuu sii daba dhigay hadalkiisa: “Maxaa yeelay iyaga waxay yihiin ciyaaryahano ku xoogan khadka dhexe, waxaana ufiirsadaan inaan horumariyo xirfadeyda.
Macalinka Spain Oo Hal Shardi Ku Xiray Inuu Morata Kusoo Daro Xidigaha Koobka Aduunka Uga Qeyb Galeysa
Xidiga Juve Ee Paulo Dybala Oo Madrid Ku Sugan Xili Uu La Kulmay Diego Simeone + Sababta